Jawaabaha Jawaab-celinta Sababta Maxay ugu Tilmaamaan Caqabadaha Loo Yaqaano Ciqaabta Panda?
Jack Miller, 8 Semt Maamulaha Guusha Macaamiilka, ayaa kuu sheegi doona sida looga fogaado ciqaabta Google iyo ugu dambeyntii ay ku sarayso SERP.
Websaydheyda waxaa lagu ciqaabay Agoosto 2013 xogta cusbooneysiinta. Waqtigaas, cusbooneysiinta Hummingbird ayaa la sii daayay, goobo kale ayaa sidoo kale lagu ciqaabay. Tan iyo markaas, ma aanan awoodin in aan dib u helo rikoodhka raadinta Google - hyseac spf 50. Ka dib markii la igu ciqaabay November 2013, laakiin ma aanan helin wargelin waxqabadka spam. Marnaba ma sameynin dhismo isku xiran oo had iyo jeer diiradda saaro qoraallada tayada leh
Marka hore, ma awoodi kari waayay sababta boggayaga loo ciqaabi lahaa. Kadib, waxaan u imid inaan ogaado in Google uu ka muuqdo kala badh boggayga boggayaga markii uu isticmaalayo algorithms search engine . Anigu waxaan isticmaalay ereyo badan oo ka mid ah ereyada muhiimka ah, waxaana suurtogal ah in ereyada muhiimka ah ee Google ay ku ciqaabtey ciqaabtayda internetka.
Waxaa hadda la caddeeyay in walxaha muhiimka ah ee muhiimka ah ay keenayaan ciqaabta Panda, laakiin waxa ugu muhiimsan ee aad maskaxda ku hayso waa maadada hal erey oo muhiim ah ama weedha maaha inay saameyn ku yeeshaan goobtaada. Taa baddalkeeda, walxaha ereyada muhiimka ah iyo odhaahda waxay waxyeello u geystaan ​​bogaggaaga..Iyadoo aad qorto mawduuc gaar ah, waxaad isticmaali kartaa tiro badan oo erayo iyo ereyo badan, iyagoo tixgelinaya in ay ku haboontahay website-kaaga. Xitaa isticmaalka shuruudaha isku mid ah uma fiicna boggaaga internetka markaad ka hadlaysid ganacsi gaar ah ama alaab. Haddii aad ku celcelisid qaladaadka iyo qalabka wax lagu qoro dhammaan qodobbadaada, waxaad ku socotaa tuugta!
Google wuxuu leeyahay dhibaatooyin badan oo leh goobaha oo dhan. Marka ay eegto website-kaaga oo ogaado in ereyo kaladuwan oo la adeegsanayo haphazardly, waxaa laga yaabaa inaanu ku siinin darajo wanaagsan. Ciqaabta laxiriira erayada muhiimka ah ayaa lagu soo rogi doonaa boggaaga. Mid ka mid ah siyaabaha ugu fiican ee looga hortagi karo dhibaatadan waa in la eego cufnaanta ereyada muhiimka ah ee xulashada Google ee xulashada Webmaster-kaaga. Waxay ku siin doontaa fahan macnaha ereyada loo isticmaali karo iyo sida looga fogaado.
Tusaale ahaan, haddii aad isticmaasho ereyga "ganacsiga" dhammaan bogaggaaga, waa inaadan iloobin in bogag badan oo ereyadani ay isticmaalaan eraygan. Sidaa daraadeed, Google wuxuu tixgelin doonaa inaad isku dayayso inaad ku xakameyso matoorada raadinta waxayna ku soo rogi doontaa ciqaabo website-kaaga.
Waxaad qaban kartaa oo aad baari kartaa nuxurada la buuxiyey adigoo ku tijaabinaya URL oo leh mashiinka muhiimka ah ee SEOBook. Haddii kale, waa inaad raadisaa URL-yada ugu sarreeya ee ugu fiican ee loogu talagalay kelmado gaar ah adigoo isticmaalaya plugin
Waxaan dareensanahay in cufnaanta 3% ama in ka badan ay kuu keeni karto dhibaatooyin maxaa yeelay Google wuxuu tixgelin doonaa inaad adigu dusha ka saareyso ereyada iyo erayada. Bedelkii, waa inaad xajisid cufnaanta muhiimka ah laga bilaabo 1% ilaa 2.5%. Waa arrin ujeedo ujeedo SEO ah mana ku soo rogi doonto ciqaabta boggaga internetka.
Qodob kasta oo aad ku qorto oo daabacdo, cufnaanta muhiimka ah waa inay ahaataa qiyaastii 2.2% hal xilli. Guud ahaan, website-kaaga waa inuu ku dhexgalaa dadka isticmaala iyada oo la adeegsanayo warbixin ku habboon oo qoraal ah. Waxay fiicnaan doontaa haddii akhristayaasha la siiyo waxyaabo waxtar leh oo wax akhriya. Tani waxay ugu dambeyntii hagaajin doontaa waayo-aragnimo user, taasoo kugu hogaaminaysa inaad ku raaxaysatid gaadiidka badan, saamiyo badan, faallooyin badan, iyo liisas ka wanaagsan.